बालबालिकामा संक्रमण बढ्दो- समाचार - कान्तिपुर समाचार
शिक्षण अस्पतालमा बिहीबार एक शिशुको कोरोनाका कारण मृत्यु, ११–१८ वर्षकामा बढी संक्रमण, संक्रमितमध्ये अधिकांश विदेशबाट अभिभावकसँगै फर्किएका, बालबालिकामा संक्रमण दर उच्च रहेकाले सतर्कता अपनाउन विज्ञको आग्रह
असार १९, २०७७ फातिमा बानु
काठमाडौँ — नेपालमा बालबालिकामा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको छ । बुधबार अर्थात् असार १७ गते मात्रै एक शिशुको राजधानीको महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कोरोना संक्रमणकै कारण मृत्यु भएको छ । म्याग्दी घर भएका उनको शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएको हो । उनलाई असार ९ गते घाँटीको शल्यक्रियाका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । शल्यक्रियापछि श्वासप्रश्वासमा समस्या आएर मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
सुरुवाती अवस्थामा थोरै बालबालिकामा संक्रमण देखिएको थियो, असारमा यो संख्या ह्वात्तै बढेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म १८ वर्षमुनिका २ हजार १ सय ९८ जना बालबालिका संक्रमित भइसकेका छन् । संक्रमितमध्ये अधिकांश ११ वर्षमाथिका छन् । ५ सय २ जना १० वर्षमुनिका छन् । बिहीबार मात्रै १० वर्षमुनिका ४८ जना बालबालिकामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
संक्रमितमध्ये अधिकांश विदेशबाट अभिभावकसँगै फर्किएका बालबालिका रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए । बालबालिकामा संक्रमण देखिए समुदायमा रोग फैलिने जोखिम भएकाले सतर्क रहन उनले आग्रह गरेका छन् ।
संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. प्रभात अधिकारीका अनुसार एक वर्षमुनिका बालबालिकामा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने भएकाले उनीहरूमा संक्रमण सर्ने जोखिम बढी छ । संक्रमितको घरमा कम उमेरका बालबालिका छन् भने बढी सजग हुनुपर्ने उनले बताए । ‘साना बच्चालाई नियममा बाँधेर राख्न पनि गाह्रो हुन्छ, त्यसैले घरका अरू सदस्य बढी सतर्क हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संक्रमितले त बच्चालाई छुँदा पनि नछोएको राम्रो ।’ दूधबाट कोरोना संक्रमण नसर्ने भएकाले विशेष सावधानी अपनाएर आमाले शिशुलाई दूध चुसाउन सक्ने उनले बताए । ‘मास्क, पन्जा लगाएर दूध खुवाउन सकिन्छ तर माया लाग्यो भनेर काखमा खेलाउन भएन,’ उनले भने, ‘संक्रमणमुक्त नभएसम्म आमा र बच्चालाई छुट्याएर राख्नुपर्छ ।’
नेपालमा कुपोषणका बालबालिका बढी भएकाले यो उमेर समूहमा संक्रमणको जोखिम धेरै रहेको उनले बताए । कुपोषणका बालबालिका रोगसँग लड्न नसक्ने भएकाले संक्रमण भएमा मृत्युसमेत हुन सक्ने उनको भनाइ छ । बालबालिकालाई सकेसम्म घरबाहिर भीडभाडमा नलैजाने, लैजानै परे मास्क लगाएर, भौतिक दूरी कायम गरेर बचाउनुपर्ने उनले बताए ।
कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक तथा बालरोग विशेषज्ञ डा. कृष्ण पौडेलका अनुसार अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालका बालबालिकामा कोरोनाको संक्रमण दर उच्च देखिएको छ । कुल १४ हजार ५ सय १९ संक्रमितमा २ हजारभन्दा बढी बालबालिका हुनु निकै बढी दर भएको उनले बताए । ‘अहिले बालबालिका स्कुल गएका छैनन्, घरमै बसिरहँदा पनि यति धेरै बालबालिकामा संक्रमण देखिनु राम्रो संकेत होइन,’ उनले भने, ‘अभिभावक होसियार नहुँदा बच्चाहरूमा संक्रमण सरिरहेको छ ।’
१५ वर्षमै रोजगारीका लागि भारत जानेको संख्या बढी भएकाले पनि नेपालमा संक्रमित बालबालिकाको संख्या बढी देखिएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ । अन्य देशसँग तुलना गर्दा नेपालमा बालबालिकाको संख्या बढी (कुल जनसंख्याको ४२ प्रतिशत) भएको हुँदा पनि संक्रमित बढी देखिएको हुन सक्ने उनले बताए । ‘संक्रमित भए पनि बालबालिका मृत्युदर कम छ तर उनीहरूले वृद्धवृद्धा र दीर्घरोगीलाई संक्रमण सार्ने उच्च जोखिम भएकाले सतर्क रहन जरुरी छ,’ उनले भने । ८० प्रतिशत धेरै संक्रमित लक्षणविहीन भएकाले यसले धेरै खतरा सिर्जना गरिरहेको उनले बताए ।
नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट तीन बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । शिक्षणमा एक, जनकपुरमा १२ वर्षीय बालक र बाजुरामा दुई वर्षीया बालिकाको कोरोना संक्रमणकै कारण मृत्यु भएको छ । डा. पौडेलका अनुसार क्यान्सर, निमोनिया वा अन्य कडा रोगका बालबालिकामा संक्रमणपछि मृत्यु हुने खतरा बढी छ ।
प्रकाशित : असार १९, २०७७ ०८:४७
असार १९, २०७७ दुर्गालाल केसी
दाङ — तुलसीपुरकी एक युवतीले बुधबार मध्यरातमा फेसबुक लाइभ गरिन् । आत्महत्याको तयारी गरिरहेको सो भिडियो देख्नेले चितवनबाट प्रहरीलाई खबर गरे ।
भिडियो लाइभ भइरहेको स्थान खोजी गर्न प्रहरी खटाइयो । सजिलै नभेटिएपछि प्रहरीको साइबर क्राइम ब्युरोमा सम्पर्क गरी लोकेसन मागियो । तुलसीपुरको रानीजरुवा क्षेत्रबाट भिडियो लाइभ भइरहेको जानकारी पाएपछि त्यस क्षेत्रका एक युवाको फोन नम्बर पनि प्राप्त भयो । प्रहरीले ती व्यक्तिलाई फोन गरी युवती बसेको घर पत्ता लगायो ।
यति गर्दासम्म युवतीले पंखामा झुन्डिएर आत्महत्या गरिसकेकी थिइन् । यसरी मृत्यु रोज्ने तुलसीपुर–५ रानीजरुवाकी २३ वर्षीया एलिसा गौतम थिइन् । भिडियोमा पटकपटक नमस्कार गर्दै, कान समात्दै पंखामा झुन्डिन खोज्दै गरेको देखिन्छ । ‘तीन मिनेटमा सबै काम सकिएको छ । हामीले खोज्दाखोज्दै समय लाग्यो । बचाउन सकिएन,’ इलाका प्रहरी तुलसीपुरका प्रमुख डीएसपी शिवबहादुर सिंहले भने, ‘मध्यरातमा भएकाले घर पत्ता लगाउन कठिन भयो ।’ गौतमले झुन्डिनुअघि ‘मेरो लासको मलामी तिमी हुनु’ बोलको गीत बजाएकी थिइन् । राति साढे १ बजेतिर ३ मिनेट ४० सेकेन्डको भिडियो लाइभ भएको थियो । भिडियोमा बत्ती अफ गर्दै फेरि पंखाको नजिक पुग्दै, फेरि अन गर्दै गरेको देखिन्छ । ‘प्रविधिले अचम्मका घटना हुन थाले । आत्महत्या गर्दासमेत लाइभ हुनु अचम्मको कुरा हो,’ डीएसपी सिंहले भने, ‘मध्यरातमा भएकाले धेरैलाई थाहा भएन । रातभर खोजी गर्दै भौंतारिनुपर्‍यो ।’
एलिसाको दुईपटक विवाह भएको र अहिले माइतीमा एक्लै बस्दै आएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक चक्रडम्बर पालले बताए । उनका बुबाआमा रोजगारीका सिलसिलामा एक वर्षअघि भारत गएपछि घरमा उनी एक्लै रहेकी थिइन् । एलिसाको गंगादेव गाउँपालिका–६, रोल्पाका पुरुषसँग ०७० सालमा विवाह भएको थियो । ‘०७१ पुसमा छोरी जन्मेको र उनी अहिले आफ्ना बाबुसितै रहेको थाहा भएको छ,’ पालले भने, ‘छोरी जन्मेको दुई वर्षपछि एलिसाको सम्बन्धविच्छेद भयो । त्यसको दुई महिनापछि गंगादेव–७ का पुरुषसँग फेरि विवाह भएको रहेछ ।’
दोस्रो श्रीमान्ले अर्कै युवती लिएर भारततिर गएपछि एलिसा वैदेशिक रोजगारीका लागि ०७४ मा मलेसिया गएकी थिइन् । ‘सात महिनापछि फर्केर तुलसीपुरस्थित माइतीमा आइन् । माइतीमा केही दिन बसेर काठमाडौं गइन्,’ उनले भने, ‘काठमाडौंमा एक वर्ष बसेर पाँच महिनाअघि तुलसीपुर आएर बसेकी थिइन् ।’ उनी बस्ने गरेको माइतीघरमा १५ महिनादेखि दुई कोठा भाडामा लिएर एक मजदुर बस्दै आएको पालले बताए । उनको कोठाबाट ‘आई लभ यु मम् । मलाई हजुरको धेरै याद आयो । म आज धेरै दुःखी छु । मेरो भाग्य हेर्नु त । म आज अन्तिम अवस्थामा पुगेको छु’ लेखेको नोटबुक प्राप्त भएको उनले बताए । आत्महत्याबारे प्रहरीले साइबर क्राइम ब्युरोसँग समन्वय गरेर थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
प्रकाशित : असार १९, २०७७ ०८:४१